निर्मला प्रकरण :रविलाई लाग्यो साथि बचाउँन खोजको आरोप ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/निर्मला प्रकरण :रविलाई लाग्यो साथि बचाउँन खोजको आरोप !
कार्यक्रममा अन्तर्वाता दिएपछि निलम्बीत डिएसपी अंगुर जिसीलाई अंगुर जिसी दुख पाइस मंगले आफ्नै ढंगले भनेर लेखेका भण्डारीले अहिले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै अर्को कडा फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् । रवि लामिछानेलाई आफ्नो साथी बचाउँन खोजेको आरोप लागाउँदै भण्डारीले रवि विरुद्ध यस्तो स्टाटस लेखेका छन्
सीधा कुरा जनतासँगमा हिजो मेरो बारेमा रिपोर्ट नै दिइएछ । यस बारे मेरो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यस्तो छ । विस्तृत विश्लेषण पछि प्रस्तुत गर्नेछु,
१– मलाई बेलुका ७.४२ बजे मात्रै मोबाइलमा फोन आएको रहेछ, मैले सुनिनँ तर ७.४३ मा फोन उठाएँ रवि लामिछानेको अफिसको ल्याण्डलाइन । ८.४५ मा कार्यक्रम आउने मलाई १ घण्टा पहिले मात्रै खबर गर्ने । त्यो त ठीकै थियो, म विशेष काममा रहेको हुनाले कार्यक्रममा लाइभ हुन सकिनँ ।
२– कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका सबै स्टाटस सत्य हुन्, जायज हुन् भन्ने मेरो दावी छ । तिनै स्टाटसको शक्तिले निर्मला प्रकरण यहाँसम्म आइपुगेको हो । मैले ती स्टाटस नलेखेको भए निर्मला ह*त्याकाण्ड सेलाएर निर्दोष जेलमा सडिरहेको आज १ वर्ष हुने थियो । अझै पनि त्यस्ता बलशाली स्टाटस लेख्ने प्रण गर्दछु ।
३– हो म पत्रकार मात्रै होइन । कञ्चनपुरका लागि यो*द्धा पनि हुँ सामाजिक न्याय, शुसासन र पारदर्शिताको पक्षधर ल*डाकू । मलाई फगत फोस्रो पत्रकार बन्नु थिएन त्यसैले देशकै अग्रणी सञ्चार प्रतिष्ठानको उच्च ओहदा छोडेर, लाभदायक सम्भावना छोडेर म कञ्चनपुर फर्केको हुँ ।
म एक्टिभिस्ट पनि हुँ भनेर लेखेको स्टाटस किन नदेखाएको रु फगत बिक्री हुने पत्रकारको लाइनमा म उभिन चाहदैन । हरेक हप्ता धारणा बदल्ने र विभिन्न स्वार्थमा अल्झेर एपिसोडपिच्छे अडान बदल्ने पत्रकार मलाई बन्नु छैन । हिजो शाही शासनका विरुद्ध पनि मैले यस्तै पत्रकारिता गरेको थिएँ, आज पनि गरिरहेको छु । र, गरिरहने छु । के यो पाप हो र?
४– घटनाको सतहमा बसेर गहिराईमा डुब्न सकिन्न रवि जी । तपाई कति गहिराईमा डुब्नुभयो भन्ने एटै उदाहरण काफी छ । डिल्ली विष्टको सरकारी मोबाइलमा पठाएको भन्ने म्यासेजको समय र दिलिपलाई सार्वजनिक गरिएको समयकै हेक्का नराखी सफेद झुठ बोल्ने तपाई खोई के मोती खोज्नुहोला खोई र?
५– मैले सिंगो घटनाक्रमलाई प्रभावित गरेको हो भने के गल्ती गरें र? तपाई पनि त प्रभावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । मैले कहाँनिर ठोकुवा गरेको छु प्रत्यक्षदर्शी नक्कली हो भनेर ? तपाईको पत्रकारिता सन्तुलित हुँदो हो त मैले प्रत्यक्षदर्शीको स्वागतमा लेखेका स्टाटस किन नदेखाएको र?
६– मैले सोमबार लेखेको शीष्ट र गहन आलेखको उत्तर दिन नसकेर राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट मेराविरुद्ध गालीगलौच शैलीमा उत्रनुभयो तपाई र? सक्नुहुन्छ भने मेरो आलेखको तार्किक खण्डन गर्नुहोस् । सबै कुरा लुकाएर गरिने तपाईको पत्रकारिता र सबै प्रष्ट लेखिदिने मेरो पत्रकारिताबीच लडाई हुनै सक्दैन, स्तर नै मिल्दैन ।
७– तपाई एउटा ‘साथी’ बचाउन लाग्नु भएको छ, मैले नातामा सालो पर्ने व्यक्ति बचाउन किन नपाउने ? पृष्ठभूमि हेर्नुस्, घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गर्नुस् । दिपक नेगी, जीवन घर्ति र चक्र वडू भन्ने नाम थाहा छ तपाईलाई रु थाहा छ भने स्मरण होस् दिलिपभन्दा पहिले प्रहरीले उनीहरुलाई फसाउन खोजेको थियो ।
मेरै स्टाटस र रिपोर्टले उनीहरुलाई फसाउन सकेन प्रहरीले । खोई ती स्टाटस देखाएको र? र, दिलिपपछिका प्रदीप रावल र विशाल चौधरी १० साउनमा कुखुरा चोरीको आरोपमा वडा प्रहरीको हिरासतमा थिए भन्ने पनि मेरै स्टाटसबाट ब्रेक भएको सत्य हो । लाज लाग्यो ती स्टाटस देखाउन र?
८– दिलिप विष्ट अपराधी हो भने कसले रोकेको छ उसलाई समातेर मुद्दा चलाउन रु तपाईसँग छ केही प्रमाण र सोझै दिलिप अपराधी भन्ने आशयले काम गरिरहनु भएको छ ? प्रत्यक्षदर्शी गोप्य राख्न सल्लाहदिने तपाईको काचो पत्रकारिता सबैले देखिसके । सार्वजनिक हुन दिनुस् त्यो प्रत्यक्षदर्शीलाई अनि थाहा हुन्छ के सत्य, के गलत भन्ने ।
तपाईको जानकारीका लागि त्यो प्रत्यक्षदर्शीलाई टेलिभिजनमा लैजानु परो भनेर महेन्द्रनगरका एक टीभी जर्ननिस्टलाई ६ महिना अगाडिबाटै भनिएको हो । भन्नेहरु न्यायका बिचौलिया थिए । ती पत्रकारले गहन अनुसन्धान पनि गरे तर ती महिला प्रायोजित हुन् भन्ने तमाम प्रमाण पाइयो ।
प्रहरीले पनि त्यसै महत्वहिन ठानेको होइन ती महिलालाई । यदी तिनै महिलालाई तपाईले भयंकर प्रत्यक्षदर्शी ठान्नु भएको हो भने तपाईको कलमले नेपाली पत्रकारितालाई कलंकित गर्नेछ । होइन, अरु कुनै महिला हुन् र उनको बयान ठोस र प्रमाणयुक्त आउँछ भने तपाईको पत्रकारितालाई सबैभन्दा पहिले मैले नै हो सलाम गर्ने ।
९– ट्वीस्ट एण्ड टर्न गरेको तपाईहरुको आरोप नयाँ होइन । बिक्री भएका धेरै पत्रकारहरुले यस्तो आरोप लगाउँदै आएका हुन्, तपाईले त कपी मात्रै गर्नु भएको हो । मैले ट्वीष्ट गरेर अनुसन्धान प्रभावित भयो भन्ने तपाईलाई मेरो प्रश्न छ – बला*त्कारपछि हत्यामा चाहिने कुनै प्रमाण बाँकी छ र? के मैले ट्वीस्ट गरेर ती प्रमाण मेटाएको हो प्रहरीले ? मैले मेट्न लगाएको हुँ ?प्रमाण नमेटिएको भए आज अपराधी घोषित गर्ने जंगेशैली देखिन्थ्यो ? दुःख त के भने तपाई अमेरिकाबाट फर्केको मान्छे, उ त्यो चोर हो भनेर राणाकालमा गरिने न्यायको पक्षपाति देखिनु भयो । हामी यो बिकट गाउँमा बसेका मान्छे संगतिपूर्ण न्यायको लडाई लड्ने, तपाई विश्वको उन्नत लोकतन्त्रबाट फर्केको मान्छे जंगेशैलीको वकालत गर्ने । यही हो तपाई र हामी माटोसँग सम्बन्ध भएका पत्रकारबीचको फरक ।
१०– एउटा कुराका लागि भने धन्यवाद दिन्छु – मैले स्टाटस लेख्दै गएँ राज्यले मेरा माग पूरा गर्दै गयो भन्ने तपाईको भनाई सत्य हो । यो शक्ति ममा कहाँबाट आयो थाहा छ ? सत्य, निर्भिकता र उच्च नैतिकताबाट मात्रै यस्तो शक्ति प्राप्त हुन्छ । आफ्नो जायजेथा लिलाममा चढाएर लडिरहेको मान्छे हुँ म जम्मा १८ लाखको बैंक कर्जामा । बेचिने अफरका अगाडि लोभिएको भए आज म तपाईको भन्दा महंगो गाडीमा गुड्न सक्थें ।
बाँकी छिट्टै मेरो अनलाइनमा प्रकाशित हुने लेख पढ्नुहोला ।
असार लागेदेखि लगातार सुन भाउ बढ्दै, तोलाको लाख नजिक